Waa tee kooxda ugu cad-cad inay la saxiixato da’yarka Jude Bellingham? … (Man United, Man City mise Chelsea?) – Gool FM
(Manchester) 19 Sebt 2021. Wargeyska The Sun ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daaha ka qaaday Kooxda ugu cad-cad labada Manchester ee Man United & Man City iyo weliba Chelsea inay la saxiixdaa da’yarka Jude Bellingham.
Manchester United ayaa ugu cad-cad inay la wareegto Jude Bellingham, inkastoo xiddiga Dortmund ay sidoo kale xiiseynayaan Kooxaha Chelsea iyo Manchester City, sidaas waxaa daabacay Wargeyska The Sun.
Kooxda Manchester United ayaa ugu cad-cad saxiixa xiddiga Naadiga Borussia Dortmund ee Jude Bellingham, sida uu qoray Wargeyska The Sun.
18-sano jirkaan Bellingham ayaa sidoo kale waxa uu xiiso ka helayaa Man City iyo Chelsea kaddib markii uu ka soo dhalaalay dalka Jarmalka oo uu kaga soo dhaqaaqay Magaalada Birmingham City sanadkii 2020.